Talking About Sexuality – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ရန်ကုန်မြို့မှာ ရုံးစိုက်တဲ့ Burnet Institute က သူတို့ရဲ့ Gender and Sexuality Training Workshop မှာ ဧည့်ဟောပြောသူအဖြစ် Sexuality and Youth ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပေးဖို့ ကျွန်တော့်ကို ဖိတ်ကြားလာပါတယ်။ လူငယ် ၂၁ ဦး တက်ရောက်တဲ့ အဲဒီ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ နေ့လည် တစ်နာရီခွဲကနေ နှစ်နာရီခွဲအထိ ကျွန်တော် သွားပြောပေးခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပနေတာ တတိယမြောက်နေ့ဖြစ်တဲ့အပြင် ကျွန်တော့် ရှေ့မှာ ဆရာမကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်နဲ့ ဒေါက်တာ ဒေါ်ခင်အေးဝင်းတို့ ပြောသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်တာမို့ ဘာပြောရမယ်မှန်း၊ ဘာလိုအပ်မယ်မှန်း မသိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် Sexuality (လိင်မှုရေးရာ) အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် လိင်မှုရေးရာ အသိပညာ၊ လိင်မှုရေးရာ သဘောထား၊ လိင်စိတ် ကိုင်းညွတ်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး အစရှိသဖြင့် ဘာသာရပ်ခွဲတွေ ရိ်ှပါကြောင်းနဲ့ အဲဒီ့ထဲကမှ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဖယ်ရှားကာ ကျန်တဲ့ ခေါင်းစဉ်များအောက်က မေးလိုရာ မေးကြဖို့ လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မေးရာမှာ ပုဂ္ဂလိက မေးခွန်းတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် အဖွဲ့ လေးဖွဲ့ ခွဲပြီး တက်ရောက်သူတွေ အချင်းချင်း ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြကာ မေးခွန်းတွေကို စာနဲ့ ရေးမေးကြဖို့ အချိန် ငါးမိနစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့က တက်လာတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ဖြေကြားပေးရင်း ကျွန်တော့် ဟောပြောမှု အစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ ဖြေကြားချက် အသံဖိုင်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
စုစုပေါင်း တစ်နာရီ နီးပါး (အတိအကျ ပြောရင် ၅၆ မိနစ်) ကြာမြင့်တဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး အချိန်အား ရတော့မှသာ နားဆင်တော်မူကြပါခင်ဗျား…
Author lettwebawPosted on 24 February 2011 27 September 2011 Categories Homosexuality, Reproduction, Sound File, Talks
16 thoughts on “Talking About Sexuality”
mi sue says:
21 March 2011 at 12:02 pm
သြော် .. နားထောင်မိတာ နောက်ကျလေခြင်း ဖြစ်ရပါတယ် ဆရာရေ့။ အခုထိတော့ ၁၀ မိနစ်စာထိပဲ နားထောင်လို့ရသေးတယ်။ ကျန်တာတွေကို buffer လုပ်ထားတုန်း 😀 တော်တော် သဘောကျနေပြီ။ 😀
အချိန်ရပါ၏ ၊ ကော်နက်၇ှင် မရသောကြောင့် နားထောင် မရပါ ။
27 April 2011 at 9:57 pm
ဒေါ်နီနှင့် ထပ်တူ ထပ်မျှ ကြေကွဲ ၀မ်းနည်းမိပါကြောင်း 😛
18 May 2011 at 3:45 pm
May be the file is corrupted, could not able to listen
19 May 2011 at 7:40 am
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… မြန်မာပြည်ရဲ့ အင်မတန် ဆိုးရွားတဲ့ ကိုးနတ်ရှင်နဲ့တောင် နားထောင်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်စစ်ပြီးပါပြီ။ လူကြီးမင်းရဲ့ စင်္ကာပူ ကိုးနတ်ရှင်နဲ့ဆိုရင် ပိုလို့တောင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားကြည့်ပါလို့သာ အကြံပြုပါရစေခင်ဗျား။ နောက်တစ်ကြိမ်နဲ့ အဆင်မပြေရင် နောက် ဆယ်ကြိမ်လောက်အထိ ကြိုးစားပေးပါ ခင်ဗျား။ 😀
3 June 2011 at 6:43 pm
I liked 90% of it but the very 10% made me so uncomfortable. I listened to the talk showaweek ago and since then I am left with all an awkward feeling that I have to write to you to ask “why” with all due respect. This is the question..
Did you askapermission from you daughter about her early age (10) menstruation?
If yes, why you didn’t let the audience know that you asked for it and for the good of many people, she agrees for you to set an example.
If no,asweet little daughter of yours doesn’t mean that you can talk about her private. Sadly, you published in facebook of her photos and everyone knows who she is and etc, ect… I know that this is all nature and nothing to be ashamed of but again, it doesn’t mean that you have to advertise in public about it unless you have an express permission to do so and you should have mentioned it to go extra miles in your show.
Saya, the comment was just what I think only and it is not in anyway insulting nor trying to get attentions from others, it simply is my thoughts. Your answer to this to me though will help me out my unsettled mind.
4 June 2011 at 1:12 am
Thank you for the comment. It would have been very valuable if your point had been made after you have gone through my works of more than 20 years. My family relationship isaunique one and we have very open line of communication between each and every family member. I would like to suggest you to read one of my articles in this blog where I interviewed my own daughter and you’ll have an idea on the norms in our family. The link is https://atkbooks.wordpress.com/2010/05/03/dream-of-teens-1/
4 June 2011 at 9:25 am
Thank you very much for your swift reply considering your works’ loads.
Apologies for not going through 20 old years of your works as I happened to know you literally3weeks oramonth ago. My bad!
I have read thoroughly the advised article of yours. I appreciated ‘the openness’ between your family members. But Saya, the suggested article made me wonder that what kind of actual conversations have been going on on daily basis as you only found out by interviewing. By the way Saya, I am not an avid reader, and going through all of your marvellous works would be an achievement itself for me as I struggle with time constraint.
There is one more thing, has it ever happened to you that for instance, you have spoken to your wife and later your son about where you are going orafamily night out or whatever and thought at the same time that you have also spoken to your daughter? But you didn’t which you didn’t know. So your daughter knew nothing about it? It does happen to almost all of us, well at least to me. In your case, as an author, whatever comes up to your mind which is invaluable to the readers, you then write about it, publish it and thought that all things mentioned in the article had gone through with each and every members of your family. Maybe not.
If my thinking process and common sense won’t match up to yourself and some others who have profoundly been reading, forgive me.
At least I have my say…be it wrong or right is another matter and that can only be achieved by open discussions and selfless communications as my thoughts go on and on…
can i download this audio file ? where ?
i can listen at office but i want to share at home
9 June 2011 at 2:39 pm
ှုIf you have the Internet Download Manager (IDM) software installed on your computer, you will be able to download the file. Otherwise the answer is no. Sorry.
10 June 2011 at 2:10 pm
ဘာမှလဲ မတွေ့မိပါလားဆရာရယ် လင့်လေး ထပ်ပေးပါအုံး
15 June 2011 at 7:05 pm
ဟုတ်ကဲ့ ခင်ဗျာ… link ထပ်ပေးစရာ မလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေနိုင်ငံကြီးမှ ကိုးနတ်ရှင် အကောင်းစားကြီးနှင့်မို့ မမြင်ရခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ကိုးနတ်ရှင် အလှည့်သင့်လျှင်မူ မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဖွင့်ကြည့် နားထောင်ရန်အတွက်မူ ကိုးနတ်ရှင် အတော်ကြီးကို ကောင်းနေခိုက်မှာမှ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာ အကြောင်းပြန်အပ်ပါ၏။ 😦
21 July 2011 at 6:59 am
မြန်မာဖောင့်တွေက သေချာမပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာကအဓိပ္ပာယ်တောင်ဖတ်လို့မရအောင်ပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Sithu Aung says:
14 August 2011 at 3:03 pm
ကျွန်တော်ဟာလိင်တူချစ်သူတစ်ဦးပါ။ ကျွန်တော်တို့ လိင်တူချစ်သူ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ အထူးသဖြင့် 18 နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ လိင်တူချစ်သူတွေ ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖြေဖြော်မှု အတွက် အသုံးချခံ နေကြရပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စတွေ ကို ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို ကာကွယ်နိုင်မယ်ထင်ပါသလဲ။ အဲ့ကလေးတွေ က မိမိကိုယ်မိမိ လင်တူချစ်သူ အဖြစ် ပွင့်လင်းစွာဝန်ခံ ထားတဲ့ ယောက်ျားလေး လိုနေတဲ့ လူတွေပါ(Homosexual) တွေ ဆိုပါတော့။
14 January 2012 at 10:43 am
ကျွန်တော့် အတွက်ဗဟုသုတ အများကြီးရလိုက်တဲ့ အတွက်ဆရာ့ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ…
Previous Previous post: နောလေ့(ခ်ျ)သည် ပါဝါမဟုတ်တော့ပါ
Next Next post: The Bolster (Audio Version)